Calling urgent! : Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 12 Martsa 2019	• 6 Comments
Fotoana mampientanentana izany, satria mitombo be ny fanoherana ny asa soratro tsy miankina. Midika izany fa ny sivana amin'ny Facebook dia lehibe ka ny isan'ny mpitsidika izay mitsidika ny tranokalako Facebook dia nihena be. Izany dia hita amin'ny antontan'isa. Na dia mizara imbetsaka aza ny hafatra dia tsy mihabe ny isan'ny mpamaky aty amin'ny tranokalako amin'ny Facebook. Mazava fa misy fanakanana saribakoly henjana ao amin'ny Facebook ary midika izany fa mbola misy ny fahalalaham-pitenenana amin'ny taratasy, fa amin'ny fomba tsotra dia tsy misy olona mahita izany intsony. Ny zavatra rehetra izay manalavitra ny foto-pisainan'ny mpanohitra na manara-maso dia tsy hita fotsiny. Tsara ny manana mpanjohy an'arivony miisa 18 ao amin'ny Facebook, saingy tsy mahita ny hafatrao ry zareo na tsy mahita azy ireo intsony.
Nahoana ianao no tokony hanahy momba izany? Satria ny olona maro dia tsy mifanaraka amin'ny fitantanana ny fitantanana ny boaty printy amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra sy ny haino aman-jery mifehy. "Eny, ary ny olon-drehetra dia mahira-tsaina", mety hieritreritra ianao. Izaho koa tsy mieritreritra fa adala ny olona; Manonona fotsiny aho fa lasa lalina be ny milalao fa mahasoa ny mihaino feo tena mahaleo tena. Heveriko fa nampiseho aho fa sahy mitaiza ny zavatra entin'ny fanoherana manara-penitra, mampihena na manakorontana.
Raha tianao io feo tsy miankina mitohy io, dia tena ilaina ny fanohanana anao. Tsy maintsy mitondra ny sanda rehetra amin'ity tranonkala ity aho ary noho ny nametrahako ny lohako ambony ambany dia midadasika be ny anarako, ka sarotra ny miteraka fidiram-bola. Aorian'ny fisehoan-javatra misy ankehitriny ary ny fitadiavana aingam-panahy ho an'ny fanoratana dia ny ankamaroan'ny vohikala dia mampiasa ny ekipa famoahana kely. Angamba izy ireo koa dia manana (AIVD) tavoahangy fanampiana. Manao ny zava-drehetra amin'ny A hatramin'ny Z aho ary tsy maintsy miaina tsy misy fidiram-bola. Midika izany fa tsy vitan'ny fitantanana ny serivisy, ny tranonkala sy ny fikojakojana ara-teknika, fa koa manoratra ny lahatsoratra rehetra aho ary tsy maintsy miaina amin'ny fanohananao. Mety ho toy ny mofomamy iray izany, saingy tadidio fa ny ankamaroan'ny tranonkala dia miasa miaraka amin'ireo tonian-dahatsoratry ny maro ary mety manana teti-bola goavana izay azony.
Vao haingana aho no nametraka ny 500 euros amin'ny famerenana indray ny code PHP efa tranainy nipoitra ny tranonkala, satria tsy voarakitra intsony ity code ity. Tetikasa sarotra ho an'ny mpanoratra iray izay miezaka ny mitazona ny lohany eny ambonin'ny rano. Ny tranonkala dia mihazakazaka indray ankehitriny. Ny fihodinana manaraka dia ny fikarohana ny fomba hampihenana ny sivana.
Tsy mitaraina, fa antso maika mba ho lasa mpikambana sy hanohana, satria mihasarotra ny mitazona ny lohan'ny rano. Mizara lahatsoratra amin'ny alàlan'ny hafatra manokana, mailaka na manondro olona ao amin'ny tranokalako, fa efa: Aoka ho mpikambana. Ilaina maika ny fanohananao! Misaotra mialoha!
Brain-Computer Interfaces efa hatramin'ny fotoana fohy: afaka ho afaka hamaky ny eritreritsika ve ny Facebook? Valiny: eny
5G sy ny fifindran'ny olombelona
Aterineto 5G manerana an'i Pays-Bas ny fanomezam-pahasoavana na fonja nomerika nomena anao?
Microsoft Hololens 2 mamy izay mety amin'ny aterineto
Tags: fanomezana, Featured, mpikambana, Martin Vrijland, fanohanana
Chris-zaza nanoratra hoe:
12 Martsa 2019 ao amin'ny 22: 10
Betsaka ny sehatra fifandraisan-davitra, fotoana haka ny Facebook, manana zavatra amin'ny sivana izy ireo.
Hitako anao i Martin ho toy ny aterineto maimaim-poana, zava-dehibe ny mampiasa vola amin'izany ankehitriny, manana ny fanohanako ianao!
Ny andevo karama nanoratra hoe:
13 Martsa 2019 ao amin'ny 10: 53
Fa misy safidy be dia be, araka ny hevitro, ny tena olana. Afaka misafidy avy amin'ny loharanom-baovao maro sy sehatra maro ny olona ka lasa ny fotoana misy ny fiaraha-mientan'ny fiarahamonina, fa amin'ny fomba hafa ... be lavitra kokoa.
Toa mazava ho an'ny tontolo ivelany izay vondrona misy anao, na tsy misy ifandraisany amin'ny fivavahana. Raha toa ianao ka tsy manana vondrona na tsanganana, dia tsy nandray anjara na inona na inona ianao ka tsy nisy na inona na inona. Amin'izao andro izao ireo andry rehetra ireo dia nanjavona avy any ivelany ary nifidy tao ambadiky ny ordinatera na smartphone izay vondrona anao ianao ... ary mahazo fanazavana miloko ianao.
Izany vaovao sy fomba fiainana izany dia miloko sy mamitaka, tahaka ny tamin'ny andro fahiny tamin'ny fotoan'ny andry, fa tsy fampahalalana ilaina avy amin'ny fahamarinana. Ny ankamaroan'ny olona (na tsia) izay ankoatra ny asany dia matetika tsy fantatra. Na inona na inona ataon'ny olona ho an'ny asany dia tsiambaratelo, araka ny voalazan'ny fifanarahana momba ny asa amin'ny sazy fanamelohana sazy. Mpisolovava iray dia tsy hilaza fa mandefa taratasy fandrahonana ho an'ireo tsy manan-tsiny, satria ny mpiasany dia mandoa betsaka amin'izany ... mba hanome ohatra. Tian'ny olona ny manohy ny fisehoan-javatra ary miatrika zava-mahadomelina any amin'ny tontolo ivelany, mba tsy hahatonga azy ireo tsy ho tratran'ny hafahafa, ny fijerena ny hatony ary ny fahaverezan'ny toerany.
Tsy maintsy mandresy lahatra amin'ny fomba iray ny olona mba hikaroka, ohatra, Martin Vrijland. Sarotra be izany satria misy fanoherana maro be. Ahoana no ahafahana manohitra fanoherana be loatra? Toa midadasika be ny lainga, ka sarotra ny mahita ny tena fahamarinana amin'ny fahatsiarovan-tena. Mandà ny ankamaroan'ny olona rehefa mahita ny tsy rariny ao amin'ny tontolo iainany izy ireo na rehefa mahita lainga sasantsasany ao amin'ny rafitra. Ny olon'ny vahoaka dia tsy mpiady fotsiny, fa ondry tsara. Raha vao manomboka mahita ireo làlan-dàlana mankany amin'ny fatin-tsakafo ireo ondry ireo, moa ve izy ireo vonona ny hanao zavatra. Saingy indrisy, na dia ny ankamaroan'ny ondry aza dia manomboka mihiaka na mitongilana ara-tsaina, ka tsy afaka manohitra. Noho izany dia mila mitady ny ondry miady isika!
Ny miaramila sy ireo mpikatsaka ny fahamarinana marina dia ho avy na ho ela na ho eo amin'ny tranonkala Martin Vrijland, fa ahoana kosa no ahatongavanay ireo ondry miady?
13 Martsa 2019 ao amin'ny 03: 31
keazer nanoratra hoe:
13 Martsa 2019 ao amin'ny 11: 28
Azoko tsara fa midika tsara ianao.
Saingy heveriko fa ity mpanoratra ity dia mampiasa Facebook araka ny tokony ho izy satria misy ny vahoaka manatrika eo (miresaka momba ny biby fiompy)
Saingy inona ireo sehatra tadiavinao?
17 Martsa 2019 ao amin'ny 12: 27
Hey keazer, eny fa na dia takatrao fa ny FB no sehatra sahaza hahatongavana amin'ny olon-drehetra, efa nampiasa ny FB nandritra ny roa taona aho, dia nahita ny sivana an'ny FB, ireo kaonty maro izay nesorina tao amin'ny blaogy 30 na tanteraka, sns. Ny fahazoana whatsapp, ny FB dia tena goavana raha oharina amin'ny sehatra hafa momba ny angon-drakitra. Tsy manana traikefa betsaka amin'ny sehatra hafa aho, saingy misy ampolony amin'ny 80 ka hatramin'ny 300 tapitrisa kaonty afaka manolotra safidy hafa. Raha lasa lehibe sy matanjaka be ny olona iray, dia afaka mamehy azy io ilay olona. Tany am-piandohan'ity herinandro ity, ny FB dia nanakana ny hingan'ny Zero, taorian'ilay fikorontanana goavana tao amin'ny aterineto fa na dia teo amin'ny politika aza, dia navadika ny ora rehetra tao anatin'ny 24 ora ary nilaza ny FB fa nanao fahadisoana anatiny izy io, fahadisoana izany na zavatra hafa fanandramana fanehoan-kevitra, iza no mahalala. Ho ahy manokana, hoy aho amin'ny FB
13 Martsa 2019 ao amin'ny 16: 51
Mila manohana an'i Martin i Martin. Ho an'ny rehetra dia manolotra ny fahaizako araka ny fahafahako na ho mpikambana. Azo atao izany. Martin ihany no tsy tompon'ny fanjakana !!!!
« MANDRAKIZAY: Fampandrenesana lehibe ny loza voajanahary manerantany!
49 namoy ny ainy tamin'ny moske roa tao Christchurch Nouvelle Zélande »
Total visits: 13.170.416
guppy op Ny mpampihorohoro sainam-pirenena diso dia manafika an'i London, Manchester, Paris, Barcelona ary Rotterdam amin'ny 23 sy 24 Oktobra?